Fampivoarana ny toekarena Niditra ao amin’ny AFC i Madagasikara
Tafiditra mpikambana anatin’ny Africa Finance Corporation na AFC i Madagasikara.
Vita omaly talata 27 aogositra teny Antaninarenina tamin’ny alalan’ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola, Richard Randriamandranto ny fifanaovan-tsonia izay maha mpikambana ny firenena Malagasy ao. Tanjona ny hampiakarana ny harinkarena faobe ho 5,2% amin’ity taona ity raha 4,2% sy 5% izany tamin’ny taona 2017 sy 2018. Ny fiakaran’ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny tsy miankina dia anisan’ny sehatra iray nahatsara sy nahazoana fitomboana sy vokatra tsara ara-toekarena. Na izany aza anefa dia hita ho marisarisa hatrany ny fandraharahana sy ny fampiroboroboana ireo fotodrafitrasa eto Madagasikara. Ho vahaolana ny amin’izany ny fidirana mpikambana ao amin’ny AFC ary tetikasa maro toy ny lalana, ny fanorenana tanàna vaovao, ny fanatsarana ny sehatra angovo sy ny herinaratra no heverina hiditra anatin’ity fiaraha-miasa ity raha ny tatitra nataon’ny minisitra ny toekarena omaly. Maro rahateo ny firenena mpikambana anatin’ny AFC ary miisa 29 sahady izany ho an’ny Afrika fotsiny izay ahafahana hampitombo ny fivelaran’i Madagasikara amin’ny firenen-kafa, indrindra ny amin’ny fampiroboroboana ny sehatra famokarana hampiaingana ny toekarena.